Ogaden News Agency (ONA) – Xogta Daahsan: Jeelka Ugu Ciqaabta Badan Geeska Africa oo Noqday Jeel-Ogaden.
Xogta Daahsan: Jeelka Ugu Ciqaabta Badan Geeska Africa oo Noqday Jeel-Ogaden.
Jeelka ama xabsiga sida xun loogu ciqaabo dad Soomaaliyeed qaarna ayba ku dhinteen sidii loo jir dilayey waxaa dhawr sanadood kahor sameystay gumeysiga Itoobiya gaar ahaana Tigreega oo uu wakiil uga yahay maamulkiisa ninka ku caanbaxay dhiigya cabnimada iyo daba dhilifka Itoobiya ay ku shaqeysato ee magaciisu yahay Cabdi Maxamuud Cumar ” Cabdi Ileey” waxaana xabsigaas oo loo yaqaan Jeel-Ogaadeen uu ku yaalaa Magaalada Jig-jiga dhinaceeda bari, waana jeel ama xabsi dhismo ahaan loogu tallo galay inuu qaado ugu badnaan ilaa sedex boqol oo ruux iyadoo dadka ku xidhan ay isugu jiraan dhalinyaro, dad da’doodu aad u weyntahay, dumar iyo caruur ay qaarkood kuba dhasheen jeelka gudahiisa.
Dadka ku xidhan Jeelkan qof ogsoon tiradooda ma jirto, xataa kuwa jeelka masuulka ka ah, lama socdaan cadadka ugu xidhan Jeelkan, sababtoo ah dadka lakeeno ee laga soo qabqabto miyiga iyo kuwii horey ugu jirayba qof dan ka leh xadhigooda iyo sii dayntooda iyo sababta ay u xidhanyihiin ayaan jirin. Marka laweydiiyo dadka magaalada Jigjiga ku nool ay ku qiyaaseen inta u dhaxaysa 5 ilaa 7 kun oo ruux. iyadoo ay jirto mar uu yiri arxan laawaha Cabdi Iley inuu dadka maxasta ah ee halkaa ugu xareysan uu sii daynayo ayaa xiligaa waxaa la’isugu keenay dad aan ka yareyn 12 kun oo qof. Sida dad xog ogaal ah ay sheegeen dadka ku xidhan jeelkaas waxa ay isugu jiraan dad ay ciidamada gumaysiga Itoobiya u soo qabsadeen dano kala duwan oo ay ka mid yahiin arimahan:
2- Waad nala shaqayn wayday oo ay macneheedu tahay Jaajuus ayaad diiday inaad noo noqoto, ama inaad dacaayadaha meelahaas ka sheeg sheegto ayaad diiday.
4- Marka aan ONLF dagaal lagalno ee ay naga guulaystaan waad ku faraxdaa.
5- Waxaad ka damqataa dadka aan bilaa macniga ku wax yeelaynayno iyo waxyaabo badan oo arimahaa laxidhiidha.
Intaas waxaa dheer oo dadka lagu soo xidhaa; Lacagihii baada ama gunada ahaa ayaad bixin wayday iyo Gabdhaha oo guurka qasabka ah markay diidaan laxidho, ama markay kufsiga diidaan tii nasiib lehna laxidho tii kalena halkaas intii lagu kufsado ladilo.
Mida ugu daran ama ugu foosha xun oo ah in ruux walba oo lasoo xidhaa kadib marka lagaraaco wadada kaliya ee u banaan ay tahay inuu is badbaadiyo uuna yiraahdo garaacitaanka iga daaya dad aan aqaano in ay Jabahada ONLF taageeraan ama aan ogahay in ay lacag bixinayaan ayaan idiin gayne sidaasna garaacitaanka lagaga joojiyo. Ka dibna intii gaari ama baabuur lasaaro lagu raadinayo cidii uu sheegay. Arintaasi ayaa ah mid jeelka looga yaqaano erayga (Ku Lug Bax) oo ah inuu ruuxu qofkii maskaxdiisa markaas kusoo dhaca uu ku hogaamiyo si ay u soo qabtaan una xidhaan isna sidii oo kale loogu garaaco ilaa oo uu isaguna qof kale oo uu ku lug baxo ka keenayo.
Arintaasi waxay noqotay in marka hal ruux laxidho uu isaguna sii xidho dhowr ruux oo kale. Waxaana dhacda in qofka maadaama habeen kasta lagaraacayo ay dadka kale ee jeelka ku jiraa maalinka danbe sirta ah (Ku Lug Bax) siiyaan oo ay ku dhahaan waxaad dhahdaa dad kale ayaan idin tusiye iga daaya garaacitaanka.
Arimaha xanuunka badan ee xabsigaas dadka masaakiinta ah lagu duleysto ka dhacday waxaa kamid ah in maalin maalmaha kamid ah nin laga keenay tuulo fog markii dhowr habeeen la garaacay ee uu garan waayay cid uu ku lug baxana uu yiri Masaajidka i geeya halkaasay joogaane oo intuu dhex galay dhowr ruux oo uusan xitaa garanayn uu farta ku fiiqay isagoo leh kuwan ayaa ila-shaqayn jiray si uu isu badbaadiyo darteed.
Dadkaa soomaaliyeed ee ku silacsan xabsigaa naxariista aan oolin dhibaatooyinka faraha badan ee haysta waxaa ka mid ah in haba yaraatee aysan helin maxkamado cadaaladeed sidoo kalena looma ogola in ay booqdaan hay’adaha caalamiga ah ee xaquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahin soo bandhigta dhibka meeshaa ka jira. Arimaha kale ee la xusi karayo ee ka jira jeelkaa dadka sida xun loogu ciqaabo inkastoo ay fara badan yihiin hadana waxyaabaha aadka u xun waxaa kamid ah oo ay maxaabiistu ka wada siman yihiin waa Jiif iyo Joog la’aan maadaama meeshii loogu tallo galay hal ruux ay ku jiraan in ka badan ilaa 7 ruux.
Cadaymaha xaqaa’iqa ah ee laga hayo dadka soo marey jeelka ayaa tilmaamaya in raashinkii ama cuntadii halka qof loogu tallo galay ay gumaysigu 7 ruux u qaybiyaan. Cuntada lasiiyo maxaabiistaas waa Rooti ama Furun qalalan iyo shaah oo hal wakthi ah maalinkii iyo canjeerada xabashida oo aana ahayn mida ay iyagu isticmaalaan ee ah mid laga sameeyay waxa loo yaqaano deefta haraagiisa oo xagooda uga dhigan qashin loogu tallo galay in la daadiyo balse dadka aana waxba haysan ay iska biyo biyaystaan.
Dhibaatoooyinka xaga jir-dilka ah (Torturing) waa mid iska cad, qaabka maxaabiista loo jir dilo waxaa ka mid ah Garaacitaan aad u fara badan oo ay ilaa toban ruux hal mar wada garaacayaan hal maxbuus, in barkad ay biyo qabaw ku jiraan lagu dhex rido maxbuuska kadib markuu saacado ku jirana intii lasoo bixiyo garaacitaan hor leh lagu bilaabo ilaa uu miyir beelo, intaas waxaa dheer Koronto xiniinyaha looga qabto ragga, gabdhahana naasaha lagaga qabto iyo ciqaabo aad u fara badan oo kale, sida kufsiga gabdhaha oo joogta ah. Waxaana jir-dilkaas u dhintay dad aad u tiro badan oon ladiiwaan galinin, lagana yaabo eheladooda inay u haystaan dad xidhan ama lacag looga cuno waa lasoo daynayaa ee keena lacagta.
Ugu dambeyntii ka sokow, xadhigga bilaa macniga ah, jir dilka iyo darxumada dadkaas tabarta daran ee Jeelkaa ku jira haysta, waxaa intaa dheer iyadoo ay qof waliba oo meeshaas ku xiran qoyskiisa lacago guno iyo baad joogto ah ka qaataan ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo kuwa dalaaliinta u ah uuna ugu horeeyo daba dhilif Cabdi Iley. Iyagoo u sheegaya in ay soo dayn doonaan ama ay u ogolaan doonaan inay tusaan amaba inta badan u sheega inay isaga/iyada gayn doonaan meel ka baxsan goobta loo yaqaano –Caqabada- oo ah meel la isku ciqaabo oo ay gayn doonaan meesha ay u yaqaanaan –Dibada– oo ah meel inyar kayara duwan meelaha la isku ciqaabo balse jeelka dhexdiisa uun ah, waxse uma sameeyaan maxbuuska ee lacago umbay kaga gurtaan marwalba dadka eheladooda lasoo xidhay.
Qore: Cabdulaahi Xuseen Iyo Cabdulahi Nur Colombo.